Sagantaa Kamisa Onkoloolessa 7, 2021 - Independent Oromia
Kurfii RSWO · Kamisa Onkoloolessa 7, 2021
Lola WBO fi LMKII gidduutti: guyyoota afran kana walitti-fufiinsaan
Kanaanis, hanga Kamisa har’aatti, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irraa kanneen dhibbaan lakkaa’aman ajjeefamuu, danuunis madoon adabamuu fi booji’amuu. Lolli kun Ona Gumii Eldalloo, araddaa Boobaa jedhamtu keessatti, Kamisa har’aallee itti-fufiinsaan adeemsifamaa jiraachuu.
Daafii WBO’n Ona Haaruu irraan gara Onoota ollaa sanii kanneen akka: Sayyoo Noolee, Innaangoo fi Hoomaa fa'itti qaxxaamuruun, 'WBOf haala mijeessitu' jechuun, dararaa fi ajjeechaan, keessattuu, dargaggoota Oromoo irratti LMKIIn raawwatamu daran hammaatee jiraachuu.
Dargaggeessi tokko ammoo, akka waan miseensi WBO loowwan uummataa hatee waliin qabameetti fakkeeffamuun, guyyaa Wiixataa sana, loowwanitti hidhamuun Magaalaa Haaruu keessa naanneffamaa ooluun, hanga har'aattillee mooraa waraana MKII kan Magaalaa Haaruu keessatti argamu hidhamuun dararaa hamaa mudachaa jiraachuu.
Sagantaa (Kurfii) RSWO Kamisa Onkoloolessa 7, 2021